Falanqaynta Nuqullada Heshiiska Dekedda Berbera.
Falanqaynta Nuqullada Heshiiska Dekedda Berbera.
Friday May 12, 2017 - 12:32:06 in by Samiir Cabdi
Waxaanu nasiib u helnay in uu na soo gaadho heshiiskii Dekedda Berbera ee maanta xukuumaddu Somaliland u soo gudbisay golaha wakiiladda si uu uga doodo. Waa markii u horaysay ee heshiis ay soo bilawday u soo gudbiso xukuumaddu Somaliland aqalka wakiiladu sida sharcigu yahay. Inkastoo sharci iyo waajib saaran tahay, haddana waa talaabo ammaan iyo dhiirigelin mudan. Intaa kadib, waxaan halkan ku soo gudbinaynaa falanqayn kooban si aan ereygii muwaadinka uga dhiibano doodda golaha ka bilaabmi doonta.
Marka hore xukuumaddu waxay keentay 2 dokumenti oo ka mid 3-dii dokumenti ee hore warbaahinta loogu faafiyay. Labadda ay hor keentay waxay ku kala suntanaayeen: (1)Is-af-garadka labadda dawladood ee Somaliland iyo Imaraadka (MoU) (2)Nuxurka Heshiiska Dawladda Somaliland iyo DP WORLD (Waa siddii ciwaankiisu ahaa)
Naqdigani wuxuu ku eg yahay "Nuxurka Heshiiska Dawladda Somaliland iyo DP WORLD (Waa siddii ciwaankiisu ahaa”. Dokumentagani oo ciwaankiisu yahay sidaa hore ku qoran, wuxuu u dhigmaa heshiiskii BPOC oo hore warbaahintu u sii daysay oo ka dhalanyay heshiiska ceshiimada (Concession agreement), in kastoo qodobbo heshiiska ceshiimada ahina ku dhex jiraan. Waxaan golaha wakiiladda la hor keenin heshiiskii ceshiimada (Concession Agreement) oo ahaa ka la sugayay ee ugu muhiimsanaa.
heshiiska dekedda Berbera
Milicsiga Guud : "Nuxurka Heshiiska Dawladda Somaliland iyo DP WORLD ”
Sidaan hore u soo xusnay waxaan meesha la keenin heshiiskii ceshiimadda (Concession Agreement). Taa bedelkeeda waxaa la keenay is-af-garad (MoU) iyo qoraal ciwaan looga dhigay "Nuxurka Heshiiska…” .
Is-af-garadka (MoU) dhex martay labadda dawladood miyay tahay in la hor keeno aqalka wakiiladda iyadoon loo rogin ” Bi-lateral Agreement”?
Waxaa ku jira qoraalka Nuxurka Heshiiska qaladaad xaga daabacadda ah. Tusaale ahaan qodobka 12aad waxaa isa seegan lacagta marka ay tiradda tahay iyo marka ay ereyadda tahay. Waxaa la qoray ” ..Waxaa wajiga 1aad ku baxaya $42,000,000 (Laba iyo lixdan milyan..” Sidoo kale qodobka 28aad waxaa la qoray waxa khilaafaadka dhexdhexaadinaysa ICC (International Court of Crimes) taas oo ay nala tahay inaan heshiiskani ku jirin waxyaabaha ay ka gar-naqdo? In la hubiyo ayay halkaasi u baahan tahay.
Falanqaynta Qoddobadda Ugu Muhiimsan ” Nuxurka Heshiiska DP World iyo Somaliland”
Heshiiska Ceshiimada (Concession Agreement) :Golaha wakiilada lama hor keenin heshiiska ceshiimada ahaa (Concession agreement) kaas oo ahaa ka laga sugayay. Waxa la hor keenay "Nuxurka Heshiiska Somaliland iyo DP World” sidaa darteed waxaa looga fadhiyay heshiisa, lama filayn "Nuxur”. Siddo kale heshiiska shirkada hawlgelinta dekedda (BPoC) xeer-hoosaadka intaan la keenin waa in la keenaa heshiiskaa iyada unkaya oo gaar ah iyo heshiiska shirkada oo aan lagu walaaqin qodobbo heshiis kale ka imanaya. Heshiiska faahfaahsan oo aan kala dhinayn ayay tahay golaha metela shacabka Somaliland sugayaa in la hor keeno.
Warbaahinta, xisbiyada iyo bulshada waxaanu u soo jeedinaynaa:
Waxaanu ku soo af-meeraynaa : ” Ilaahow eexna ha nagaga tegin, aqoon darrana ha nagu cadaabin.”
Waxa Qoray: Xamse C. Khayre & Xuseen Cabdi Cali "Badhaani”